Zvirongwa zveGore Idzva uye Zvirongwa Zvinogona Kukubatsira Iwe Kuzviwana | Linux Vakapindwa muropa
A gore idzva riri kuuya uye pamwe naro gore idzva zvisarudzo. Kunyangwe iwe uchida kudzikira uremu, dzidza mutauro, siya basa rako kuti uve wako wega bhosi, kana zvimwe zvinokwanisika kana kupenga kurota, iwe uchagara uine yakavhurwa sosi chirongwa iyo inogona kukushandisa kwaurishambadzo.
Ngationei, semuenzaniso, zvinhu zvitatu izvo mudetembi wekuCuba José Martí akataura kuti munhu wese anofanira kuita muhupenyu hwake hwese: Enyora bhuku, sima muti uye uve nemwana.
1 New gore mapurojekiti
1.1 Nyora bhuku
1.2 Dyara muti
1.2.1 Vhura Bindu
1.2.3 Iva nemwana
1.2.4 Nguva nenguva Karenda
New gore mapurojekiti
Sekuziva kwangu, nyanduri haatsanangure mhando yebhuku ratinofanira kunyora. Kana kana mablogiki achiverenga semabhuku. Zvisinei, mune zvinyorwa iwe une zvese sarudzo iwe yaungade.
Ngatitarisei zvimwe zvirongwa zvekunyora bhuku rekunyora. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti izvi zvirongwa,Kunyangwe mune dzakawanda zviitiko ivo vane ekutanga mazwi ekugadzirisa mashandiro, ivo vari kwazvo zano varongi. Mavari unogona kuva nemakadhi ane nhoroondo yehupenyu hwevatambi, nyora ongororo yechirongwa chebhuku rese uye uone izvo zvichaitika muchitsauko chimwe nechimwe.
Iyo o ndeye yakavhurika. Kufanana nemamwe akawanda akavhurwa sosi mapurojekiti iyo forogo yeimwe iyo isisipo. Iyo yazvino vhezheni Inowanikwa panguva yekunyora iyi 25/12/20 saka kukura kwayo kuchiri kuenderera. Iyo yakanyorwa muJava uye ine shanduro dzeLinux (DEB, RPM) Windows uye Mac OS X.
oStorybook haisi kungokutendera iwe kuronga yako nyowani, zvakare yakakosha pakuronga nyaya pfupi, kureba kwechimiro, zvinyorwa, uye zvinyorwa zvemamuvhi.
Chirongwa ichi chinenge chose chakashandurwa muchiSpanish, asi zvinyorwa zvacho zviri muchiFrench. Chimwe chakakosha ndechekuti kana iwe uchida kugadzira faira nyowani, unofanirwa kusarudza sarudzo Vhura iyo iripo faira.
Sezviri pachena zvinokwanisika kushandisa yekunze mupepeti. Zvichida sarudzo iri. Asi, mune zvinyorwa hazvitaure kuti sei kana rudzii rwemupepeti. Mumibvunzo inowanzo bvunzwa, izvo zvaanokurudzira kutevedzera nekunamatira kubva kuIzwi processor.
Izvi ndizvo chirongwakunyora zvinyorwa zvitsva zvinoteedzera modhi izvo zvatinoona kazhinji kwazvo zveyero yemahara vhezheni uye yakabhadharwa vhezheni ine zvimwe zvinowedzerwas. Iyo yekutanga modhi inobvumidza kugadzirwa kwemavara, nzvimbo, zviitiko uye zvitsauko mukuwedzera kune kutumira kunze kune pdf, .doc uye txt. Iyo yakatsigirwa modhi ine mutengo wakarondedzerwa wemakumi gumi nemashanu euros (inova yakanyanya kushoma kupfuura nzira dzekubhadhara dzeimba) inosanganisa epamberi magwaro ekugadzirisa mabasa, madhayagiramu akadai semitsara yezvinyorwa uye hukama uye nerima nzira.
Nehunyanzvi iwe unogona kudyara muti uchishandisa yemahara software. Zvinotoda kushandisa mizhinji yeArduino module uye yakati wandei yeProgramu chirongwa. Zvinogona kunge zvichinyanya kunakidza uye kana iwe uine gadheni, iwe ungangozvizama. Inogona kunge iri imwe yemapurojekiti egore rangu nyowani e2022. Chandinogona kukupa parizvino mamwe mazano epurogiramu ekuronga gadheni.
Rega nditore ndima kubva kuWikipedia
Permaculture chirongwa chezvekurima uye zvehupfumi, zvematongerwo enyika uye zvemagariro dhizaini inoenderana nemaitiro uye hunhu hwenzvimbo yezvisikwa.
Mune mamwe mazwi, ndezvekusarudza izvo zvakarimwa uchifunga izvo zvakanakira nharaunda.
opengarden isoftware yeFrance yekutarisira kwebindu pasi pehunyanzvi hwe permaculture. Iyo inobvumidza inowirirana manejimendi ezvirimwa zvekurima, pamwe nekuronga kwegore uye kutenderera kwezvirimwa pamusoro pemakore mashanu.
Pakati pemidziyo yayo, inopa mukana wekugadzira chirongwa pamwe nemamiririri, machira ezvirimwa, tafura yekuronga yegore rega pachivara, uye tafura yekutenderera kwezvirimwa pamusoro pemakore mashanu pachivara chimwe nechimwe nekuona kwezvirimwa. mhuri yebhotani.
Martí haataure chero chinhu pamusoro penyaya iyi, asi kana iwe waedza kuedza kudyara muti, iwe ungangoda kuuchengeta uri mupenyu kwenguva yakareba sezvazvinogona. Mune ino kesi, izvo zvandiri kuenda kukurudzira haisi chirongwa asi a website , que Mune mirayiridzo yekuti ungagadzira sei yako yega otomatiki gadheni kudiridza uye kuongorora system. Iyo yakavakirwa paArduino module uye iri pasi pekuvandudzwa.
Kutaura chokwadi ndanga ndichizeza kuisa chikamu ichi pakati pezvirongwa zvegore idzva. Icho chinyararire kwazvo nyaya kune vanhu vazhinji uye zviri nyore kwazvo kuwira mune yakashata kuravira. Asi, tichifunga kuti urwu ruzivo runogona kubatsira kune mumwe munhu, heino toenda.
Nguva nenguva Karenda
Ichi chirongwa chiri mumabhuku eUbuntu (ndinofungidzira kuti chinobva kunaDebian) pasi pezita rekuti pcalendar. Ini handina kuwana webhusaiti saka handizive kana ichiwanikwa kune kumwe kugovera kana masisitimu anoshanda.
Iyi software inogadzirwa nevakadzi inokutendera iwe kuongorora kumwedzi uye kuona kuti ndeapi mazuva angangowanzoitika. Uyezve tarisa iyo nhumbu, kuverenga danho, sarudza iyo ingangodaro zuva rekuzvarwa uye nyora wega manotsi.
Zviripachena zvese izvi pasina vimbiso.
Chero zvingave zvirongwa zvako zveGore Idzva, tinoda kuziva kana iwe wakazviita uye kuti ndeapi software awakashandisa kuzviita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mapurojekiti egore nyowani uye zvirongwa zvinogona kukubatsira iwe kuzviita
José Martí aisangove mudetembi wekuCuba, ndiye zvakare wepasirese, anodarika uye anodikanwa wevaCuba. Iye anoonekwa navo seGamba reNyika uye ini ndinomuti Baba veMweya veCuba Rudzi.
Ini ndaive ndisina chinangwa chekukanganisa kubva pane zvakaitwa naMartí. Ini ndanga ndisiri kunyora nezvake.
Ini handimutsoropodzi, asi, ndinofara kuti iye anokudzwa Cuba akamukurudzira. Ini ndaingoda kujekesa nezvekuva wekuMarti.